Haala Qabatamaa Dhaaba OPDO fi Bulchiinsa Lammaa Magarsaa -
OPDOn har’a kun OPDO kaleessaa kan Abbaaduulaa waliin imaammati siyaasa isaanii tokkuma. Garaagarumtiin isaan gidduu jiru akkaataa itti haasaa arraba tolfatanii ummata sossobanii ofitti qabuuf yaaluu qofaan yoo ta’e malee Jijjiiramni OPDO akka dhaabaatti ammallee sichi qabsoo cimaa barbaada.
Milkesa Hailu irraa
OPDOn akka dhaaba siyaasaa tokkootti Dadar ykn Daddabit keessatti tolfamuu ishee irraa kaastee dhaaba bu’aa ummata Oromoo tiksuuf bixxilamte hin turre. Wayyaaneetu meeshaa yookaan ulee ittiin fakkeessitee of duraa qabdee saba Oromoo gabroomfatuu fi ABO ittiin duradhaabbachuuf tolfattedha. Kanaaf amanamummaan OPDOn qabdu akka dhaabaatti kan warra tolfataniiti malee kan ummata Oromoo hin turre ammas miti.
Waggaa 27 guutuu qaama gita gabroomfattu waliin harka mirgaa wayyaanee ta’uudhaan ummata Oromoo mirga isaa fi biyya isaaf falmatuun hidhaa, reebaa, torchii godhanii qaamaa hir’isuu, ajjeesuu, saamanii hiyyoomsuu, qehee isaa irraa buqqisuu fi biyya irraa godaansisaa har’a gahan. OPDOn akka dhaabaatti waan jijjiiramteettu tasa hin qabdu. OPDOn har’a kun OPDO kaleessaa kan Abbaaduulaa waliin imaammati siyaasa isaanii tokkuma. Garaagarumtiin isaan gidduu jiru akkaataa itti haasaa arraba tolfatanii ummata sossobanii ofitti qabuuf yaaluu qofaan yoo ta’e malee Jijjiiramni OPDO akka dhaabaatti ammallee sichi qabsoo cimaa barbaada.
Garuu OPDO keessa namoonni akka dhuunfaatti sabboononni saba isaaniif quqamanii fi yaadan tari Lammaa Magarsaa illee dabalatee heddu akka jiran beekamuu qaba. Akka dhaabaatti garuu OPDOn amma illee meeshaa wayyaanee ti.
Bulchiinsa Lammaa Magarsaa maaltu fide?
Gartuu bulchiinsa Lammaa Magarsaa kana Wayyaaneen gara aangootti kan fiddeef fedha ishee jaalattee ummata Oromoof yaaddee utuu hin taane Qabsoon ummata Oromoo fincila diddaa gabrummaa wal irraa hin citne Qeerroo Bilisummaa Oromootiin bara dheeraaf gaggeessameen fi fincila bifa addaan ammoo waggaa sadan darban kana godhameen kokkee ishee hudhee waan qabeef tooftaa ittiin qabsoo ummata Oromoo kana doomsituu fi tooftaa ittiin sirna cunqursaa ishee dheereffachuuf mala dhahatteedha.
Wayyaaneen umurii aangoo ishee dheereffachuuf dirqii utuu hin jaalatiin kadiroota sobaniillee ta’u fedhii ummatichi onnee isaa keessa qabu baasanii fakkeessii dubbachuudhaan bilisummaa oduudhaan arrabaan qofa gonfachiisanii sirna Ihaadig jala ummata Oromoo kan tursuufi muuduu ture. Kanatti milkooftee jirti. Lammaa Magarsaas haasaa isaa keessatti kanuma mirkaneessee ture. Akkas jedhe “dhaabni keenyi OPDOn sigigaatee mucucaatee ture garuu immoo hin kufne. Nuti kadroonni haaraan dhaaba keenya qaqqabnee waan uummatichi barbaadu qofa haasahuudhaan dhaaba keenya kufaatii oolchinee miila lamaan gad-dhaabnee jirra “ jedhee dubbachuudhan dhugaa dirree baasee jira.
Akka ani hubataa jiruutti bulchiinsi Lammaafaa kun akeekii fi kaayyoon isaa inni guddaan dhaaba isaanii OPDO meeshaa fi Niitii TPLF taate kanan Warraaqsi Oromoo Qeerroo bilisummaa Oromootiin gaggeeffame ishee raasee caasaa bulchiinsa ishee diigee waan tureef deebistee of ijaaruuf Arraba damma dibattee summii QBOtti facaasuudhaan OPDO Ulee TPLF deebisanii lubbuu itti horanii garbummaa uummata Oromoo irratti tursuuf waan akeekameedha malee dhugumaan saba Oromoof yaadanii gabrummaa hiddaan buqqisanii bilisummaa fi walabummaa ummata Oromoof fiduuf hin turre, mitis.
Haata’uutii bulchiinsi Lammaa kun cunqursaa siyaasaa fi saaminsa dinagdee bara dheeraaf ummata Oromoo irra ture kana hiddaan buqqisee aantummaa saba isaaf qabu mul’isee oromoo bilisoomsee oromiyaa walaboomsuuf dhugumaan akeeka ni qaba yoo ta’e waadaa afaanii fi dabballummaa siyaasaa arraba damma dibatanii summii facaasuu qofaan kan ta’uu danda’u miti. Lafa irratti qabatamaan hojiin siyaasaa hiika qabu hojjetamuu qaba. Kunis kan ta’uu danda’u :
Tokkoffaa irratti duraan dursee OPDOn akka dhaabaatti meeshaa cunqursaa taatee wayyaaneetiin tolfamtee wayyaaneef tajaajilaa har’a geesse kun diigamuu qabdi, yookiin ammoo heeruma wayyaanetti fi Ihaadigitti heerumtee jirtu kana hiikkattee jalaa baatee qophaa of dandeessee of dhaabuu qabdi, bilisummaa dhaaba ishee labsachuu qabdi. Maalifree dhaabni bilisummaa ofiifu hin qabne ummata bilisoomsuu hin dandahuti.
OPDOn ummata Oromoo bulchaan jira jechaa odeessaa gama tokkoon ammoo ummati Oromoo cunqursaa jala jira jedhanii ummatichatti lallabuun kun dubbii walfaalleessuudha. Silaa utuu akka sirnaa fi seeraati OPDOn qaama aangoo fi bulchiinsa of harkaa qabu waan ta’ef Uummata bulchaa jiruuf waan isaaf malu karaa siyaasaan, dinagdeen fi nagenya isaa tiksuufiin guutummaa guutuutti hojiitti hiikuudha male waa’ee cunqursaa kan haasahuun isaaf hin malle ture. Kanaaf OPDOn qaama cunqursituu saba oromoo taatanii jiraachuu irra wayyaanee irraa hiikkachuu isiniif wayya kan jedhamuuf. Bor seenaan seerris isin gaafata waan ta’ef.
Bifa amma OPDOn hidhaa takaallaa humna waraanaa fi humna tikaa Wayyaanee jala jirtu kanaan Ummata Oromoo aangoo poletikaa qabsiisuu fi gabrummaa hiddaan buqqisanii Oromiyaatti ittisa waaraa fi bilisummaa Ummata Oromoo ni fidna jedhanii yaaduun tasa gonkumaa hin yaadamnee dha yoo umurii gabrummaa dheeressu ta’e irraan kana hafe. Kanaaf furmaati isaa wayyaanee irraa hiikkatanii gara QBO saba ofiitti makamuudhaan caancala waraanaa fi tika TPLF fi caancala gabrummaa cicciranii bilisummaa saba ofii labsachuu qofatu furmaata ta’a.
Inni lammaffaan bulchiinsa Lammaa Magarsaa irraa eegamu, Uummata Oromoo humneessuu dha, kunis Qeerroo har’a kunoo iyyee lallabee nuhidhachiisaa jedhee himataa jiruun ijaaranii fi hidhachiisanii akka isaan bilisummaa isaanii fi biyya isaaniif falamatan gochuu dandahuudha. Humna ittisaa yookaan poolisaa hidhatee akka ammaan duraa fi amma illee darbee darbee Uummata isaa fi lammii isaa irratti qawwee dhokaasu utuu hin taane Humna waraanaa diina halagaa irratti qawwe dhokaasu fi lammii isaaf ammoo gaachana kan ta’e fi roorroo irraa dhorkuu fi daangaa oromiyaa kabachiisu ijaaranii hidhachiisuu dandahuu dha. Oromoo qawwe hidhate irraa eegamuu ammoo yammuu lammii isaa obboleessa isaa isa biratti humni diinaa Agaaziin rasaasaan funaantu hidhataan Oromoo ammoo qawwee lafa kaahee kan diinaaf dhagaa karaa irraa funaanu utuu hin taane kan Agaazii rasaasaan hudduu keessa gobu ta’uu qaba.
Inni sadaffaan bulchiinsa Lammaa Magarsaa irraa hatattamaan eegamu, hidhamtoota siyaasaa Oromoo hatattamaan hiikuu yookaan hiiksisuu dha. Hidhamtootni syaasaa Oromoo har’a kumaatamaan mana hidhaa wayyaanee keessatti gidirfamaa kan jiraniif hatanii yookaan qehee namaa deemanii fi nama ajjeesanii miti. Waanuma sababa mirga fi bilisummaa saba isaaniif dubbatanii fi falman qofaaf. Waan baayyee nama ajaayibu keessaa ammoo waan qabsaawotni kun dubbatanii ittiin yakkamanii hidhaman kana har’a Lammaa Magarsaa OPDO du’a irraa oolchuuf dubbataa oolu caale yookaan irraa adda ta’ee miti, isuma har’a Lammaan waltajjii irraa lallabaa ooluti qabsaawonni sabaas haasawanii kunoo hamma har’atti mana hidhaa keessaa torchii ta’aa jiru. Yoo dhugumaan haasaan bulchiinsi Lammaa lallabaa oolu kun dhugaadha ta’e qabsaawonni sabaa kunis waan addaa dubbataniiran hin qaban waan ta’eef guutummaan ilmaan Oromoo mirga isaaniif falmatan mana hidhaa keessaa daddaffiin bilisa ta’uu qabu. Yoo kana hin goone sobaa jirtu, tooftaadhaan umurii wayyaanee fi gabrummaa Oromoo irratti dheeressaa jirtu.
Inni arfaffaan bulchiinsa Lammaa irraa eegamu: Akkuman olitti ibsuuf yaaletti OPDOn wayyaanee irraa erga hiikkatteen booda mooraa qabsaawota bilisummaa Oromootti makamuu dha. Tokkummaa fi tumsa dhaabolee siyaasaa Oromoo hunda waliin godhachuu fi waliin hojjechuu dandahuu dha.Bulchiinsi lammaa irraa deddeebi’ee waa’ee tokkummaa ummata fardii lallabaa oolu. Dhugaadha waa’ee tokkummaa dubbachuu fi tokkumma barsiisuun baayyee dansa, bu’aa male fafa ykn miidhaa tokko illee hin qabaatu tokkummaan humna waan ta’eef. Garuu ani akka hubannaa kootti Uummati Oromoo akka sabaatti rakkina tokkummaa sabaa hin qabu. Sabni Oromoo duris tokko, har’as tokkuma. Diinni saba Oromoo illee bara dheeraaf tokkummaa saba Oromoo sibiila irra jabaatu tooftaa addaa addaan diigdee bitteenneessuuf yaalii isheen hin goone hin jiru, garuu hin dandeenye. Sababiinsaa Sabni Oromoo tokkuma waan ta’eef.
Haata’uutii garuu hir’ina tokkumma kan qabu dhaabolee siyaasaa Oromooti male Uummata Oromoo miti. Garaagarumtii yaadaa irraan kan ka’e dhaaboleen siyaasaa Oromoo dhibdee uumman irraan kan maddu rakkoon ilaalcha siyaasaa hawaasa Oromoo keessatti mul’achuun isaa waan hafneedha. Kanaaf dhaabolee Oromoo guutummaatti Uummata Oromoon jaalataman bakkeetti achi dhiibanii fi dhiisanii waa’ee tokkummaa lallabuun gonkumaa waan hin fakkaanneedha. Kanaaf bulchiinsi Lammaa hatattamaan walta’insa siyaasaa ABO fi dhaabolee siyaasa Oromoo hunda waliin godhachuun irree tokkoon waliin qabsaawudhaan gabrummaa hiddaan buqqisuudha.
Hubachiisa: Bulchiinsi Lammaa Magarsaa Xuqaalee tokkoo haga afuriitti armaan olitti tarreeffaman kana hatattamaan hojjiitti yoo hin hiikne haasaan isaan dubbatan hundi soba akka ta’ee fi tooftaadhaaf arraba damma dibatanii umurii wayyaanee dheeressuudhaan gabrummaa nu irra tursuuf kan akeekamee jiru ta’uu isaa Ummati Oromoo dammaqee hubachuudhaan fincila xumura gabrummaa finiinsuu akka qabu hubatamuu qaba.
Gadaan gadaa bilisummaa ti!!!!!
3 thoughts on “Haala Qabatamaa Dhaaba OPDO fi Bulchiinsa Lammaa Magarsaa”
Silaas qabsoo dhiiftaniittu wayyee namaa fi dhaabaa hasa’aa oolaa. Bilisummaan silaa oduu fi ololaan dhuftee, ture erga bilisoomnee.
Ati woo essa jirta? Jaarmayaanis namuma, namnis Jaarmayaa dha. Osoo dura hunduu ani maalin gumaache jedhee of gaafatee, silaa hardha as hin jirru. Ormatti quba qabuu dura ofitti Haa qabnu.
Dhugaa jette; kan qalbii qabu haa qalbeeffatu!